Fitsaram-bahoaka tao Moramanga : nodoran’ny olona ny fiaran’ilay Karana nahafaty olona 5 | NewsMada
Araka ny vaovao avy any an-toerana, karana iray sy vehivavy iray tao anatin’io fiara io. Nitsoaka nandeha tany amin’ny biraon’ny polisy ilay karana ary notanana avy hatrany. Ilay vehivavy kosa tapa-tongotra ary nalefa any amin’ny hopitaly. Soa ihany fa tsy nodoran’ny olona tao anaty fiara tao izy ity.
Rehefa avy nanala ny fony teo amin’ilay fiara 4×4 ny olona, nirohotra nankany amin’ny biraon’ny polisy nitaky ny hamoahana ilay karana hanaovana fitsaram-bahoaka. Nitangorona teony olona marobe nitabataba hatramin’ny ora nanoratanay. Nandamina ny toe-draharaha ny lehiben’ny mpitandro filaminana any an-toerana.
Mampiseho tsy fahatokisan’ny olona ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana ny fitakiana fitsaram-bahoaka tahaka itony. Eo ihany koa ny fankahalana vahiny sy ny olona manambola raha vao misy ny trangan-javatra tahaka izao. Maneho ny alahelon’ny olona sy ny elanelana be misy eo amin’ny mpanan-karena, ny vahiny ary ireo vahoaka tsy mandady harona ny raharaha tahaka izao.